Angel – Biya-dhaca ugu dheer Adduunka | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Angel – Biya-dhaca ugu dheer Adduunka
Angel – Biya-dhaca ugu dheer Adduunka
Posted by: radio himilo April 1, 2017
Muqdisho – Biya-dhaca Angel ee ku yaalla Koofur America waa midka ugu dheer biya-dhacyada adduunka.
Ku dhex-yaal xarunta Canaima National Park ee dalka Venezuela, Angel sidoo kale waa mid kamid ah biya-dhacyada ugu quruxda badan dunida. Waxay 802 mitir ka sarreysaa oogada dusheeda – biya-dhacana wuxuu ku shubmaa webiga Kerep River.
Dherersanaanta biya-dhaca Angel aalaba kama dhigna in biyuhu aysan soo gaarin dhulka.
Goobtan la yaabka leh waxay aheyd mid aysan dunida ogeyn ilaa sahmiye James Crawford Angel uu asteeyey sanadkii 1933 xilli uu baadi-goobayay dhagxaan qaali ah. Wuxuu isku dayay inuu diyaaraddiisa ku dejiyo Ayuan-tepui sanadkii 1937 hayeeshe degis kadib way awoodi waayeen inay kicitimaan.
Sidaas darteed, isaga iyo saddax jaallayaashiisa kamid ah waxay ku noqotay inay lug kaga daagagaan biya-dhaca. Waxayna ku qaadatay 11 maalin inay dhulka ku yimaadaan – iyaga oo awooday inay dunida u weriyaan biya-dhacan dabiiciga ah kaas oo ugu danbeyn noqday mid caan baxay. Waxaana lagu magacaabay Angel si loo sharfo doorkiisa.
Diyaaraddu waxay kusii nagaatay goobta muddo 33 sanadood ah kahor intaan helicopter looga soo qaadin.
Previous: Buundada Sky Bridge ee Malaysia
Next: Lakulan: Haweeneyda daryeesha in ku dhow 1000 Bisado ah